Azalid Powder (Azithromycin) – Online Myanmar Pharmacy
Azalid Powder (Azithromycin)
Azalid Powder (Azithromycin) - is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
အဇာလစ် ပေါင်ဒါ ဆေးသည်ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ တိုက်ဖိုက်ရောဂါများ လည်ချောင်း ယောင်ခြင်း ၊ အာသီးယောင်ခြင်း ၊ နှာခေါင်းတွင်းအမြှေးပါးယောင်ယမ်းခြင်း ၊ စသော အထက်ပိုင်းအသက်ရှုလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ရောဂါများ လေပြွန်ရောင်ယမ်းခြင်း ၊ အဆုတ်လေအိတ်ငယ်များယောင်ယမ်းသောနမိုးနီးယားရောဂါ များ နှင့် အရေပြားနှင် ့အရေပြားအဖွဲ ့အစည်းများတွင်ပိုးဝင်ခြင်းများဖြစ်သော ဝက်ခြံ၊သွေးစုနာများ အနာအမျိုးမျိုးနှင် ့လိင်အဂါပိုးဝင်ရောဂါများ သွားနှင့်သွားဖုံးဆိုင်ရာပိုးဝင်ခြင်းများတွင်ကုသရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
AZALID Powder for oral suspension. Azithromycin is an azalide antibiotic,asubclass of the macrolide class of antibiotics. Azithromycin acts by binding to the 50s ribosomal subunit of susceptible organisms and thus interferes with microbial protein synthesis.